Samsung waxay soo bandhigeysaa astaamaha cusub ee shaashadda geeska | Androidsis
Samsung waxay soo bandhigeysaa astaamo cusub oo shaashadda Edge ah
Manuel Ramirez | | MWC, Noticias, Samsung
Waxaan aragnaa terminal aad iyo aad u badan oo bixiya guddi sare, sida LG V10 ama kaliya LG X Screen, si adeegsaduhu si dhakhso leh wax ugu arko hadaad hayso ogeysiis cusub sida fariimo, emayl ama wicitaanno aan la qaban. Isbeddel lahaan kara curyaannimada yar ee cunaysa batteri badan, sidaa darteed waxaa badanaa lagu bixiyaa aalado leh awood batteri sare leh ama leh nooca 6.0 ee Android oo leh waxyaabo aad u fiican oo la taaban karo oo ku saabsan waxtarka tamarta ee terminaalka. Noqo sida ay ahaan karto, sanadkaan sidoo kale wuxuu noqon karaa kan labaad ee dariiqa si loogu bixiyo astaamo kale oo soo jiita dareenka dadka isticmaala iyo xitaa in ka badan marka Galaxy S6 geesku uu helay aqbalaad ka wanaagsan tii la filayay markii hore.
Qoraalkan cusub ee Galaxy S7 edge, Samsung ayaa dib u soo celisay taas shaashadda labaad ee gaarka ah taas oo u oggolaanaysa marin u helista dhammaan noocyada ogeysiisyada in lagu daro, haddii aad rabto, wararka ugu habboon ee ku saabsan dhaqaalaha ama isboortiga oo ay ku jiraan isu-geeyayaasha wararka kala duwan Maanta waa markii Samsung lafteeda ay soo bandhigtay soo gelinta degelkeeda oo faallo ka bixinaysa qaar ka mid ah sheekooyinka shaashadda geeska ee Galaxy S7 ee soo socota ee ay shirkadda lafteeda ku soo bandhigi doonto Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee Barcelona. Waxyaabaha cusub ee gunta geesku ka kooban yahay waxaa ka mid ah qaraar sare oo gaaraya illaa 550 pixels ama ikhtiyaarka ah in la abuuro dhacdooyinka kalandarka ama la dhigo digniin.
1 Warar dheeraad ah oo ku saabsan guddiga geeska
2 Xallinta sare
3 Xidhiidhadaada iyo barnaamijyadaada ayaa gacanta ku haya
4 Abuur shaqooyinka geeska
Warar dheeraad ah oo ku saabsan guddiga geeska
Guddigani wuxuu ciribtiraa runta markay tahay qaabeynta Gabi ahaanba waa cajiib. Qalooca shaashadda oo bixiya dareemo kale oo qeexaya terminal, S7, oo ay ku jiri doonaan geesaha wareegsan oo la dhihi karo waa Galaxy oo leh curfaha ugu badan ilaa maanta.
Hagaajinta gudigu waxay u socotaa a shaashadda shaashadda ayaa lagu hagaajiyay xallinta iyo taxane ah astaamo cusub oo u oggolaanaya la falgalkiisa si ay u qabtaan hawlo yar yar. Dhowr suun oo fudud, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso ficillo yar yar oo aad ku hesho macluumaadka ku habboon hab u sii gudbaya heer kale oo aan horay uga ahayn nooca Galaxy S6.
Nooca ugu horreeya ee shaashadda geeska Galaxy S6 wuxuu lahaa xal ah 260 pixels, taas oo qayb ahaan xadiday waxyaabo badan oo la muujin karo. Hadda, soo saaraha Kuuriya ayaa hagaajiyay khibradda isticmaaleha isagoo gaaraya 550 pixels, taas oo labalaabaysa fursadaha waxyaabaha laga soo bandhigi karo kooxdan.
Cusboonaysiintaan qaraarka waxay tusinaysaa imaatinka awoodaha cusub taasi waxay horumarin doontaa gudigan si aad ah, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in sidoo kale la kordhiyo isticmaalka batteriga maaddaama ay jiraan wax ka badan labalaab pixels lagu soo bandhigo shaashadda.
Xidhiidhadaada iyo barnaamijyadaada ayaa gacanta ku haya
Shaashadda geesku waxay u oggolaaneysaa waxyaabo aad u muuqda oo cajiib ah sida darfaha geesaha, toobiyeyaasha loo maro macluumaadka iyo shaqooyinka qaarkood. Isticmaalayaasha waxay awood u yeelan doonaan inay astaysto ilaa sagaal guddi kaas oo ay kujiraan xiriirada ama Dadka iyo barnaamijyada.
Gudiga xiriirada ayaa kuu ogolaanaya inaad marin toos ah ugu hesho xiriirada aad kahesho isla aagga. Markii hore, muuqaalkani wuxuu soo bandhigay astaamo sawir aad u yar oo ka mid ah shanta xiriir ee ugu muhiimsan isticmaalaha ee lala xiriiriyay astaamahooda; hada kuwan waxaa lagu muujiyey sawirada hoostooda waayo-aragnimo kor loo qaaday. Faa'iido kale oo yar ayaa ah ka mid noqoshada astaanta astaamaha bidixda hoose.
Markay tahay barnaamijyada, guddigan hadda waxaa ku jira awoodda loo leeyahayin lagu daro ilaa 10 codsi iyo xitaa awoodda lagu soo bandhigi karo galka dhan si loo helo urur ku filan sida ku xusan baahida isticmaalaha.
Abuur shaqooyinka geeska
Tani waa suurtogal inay tahay mid ka mid ah riwaayadaha ugu waaweyn ee u oggolow in la abuuro hawlo sida dhacdo ka mid ah Qorsheeyaha 'S,' u yeel qaylo-dhaan ama qor farriin qoraal ah. Xullo qalab ah ayaa lagu daray oo ay ku jiraan jaantus, toosh khaas ah, ama taliye.
Samsung hadda waxay ku dartay suurtagalnimada habee tab taas oo u oggolaanaysa marin u helida qolladaha xiriirka, barnaamijyada iyo shaqooyinka. Shakhsiyeynta shaqsiyadeed waxay mareysaa booska, cabirka iyo daah furnaanta.
Faa'iidooyinka kale ee gudigan cusub ayaa noqon doona software cusub ayaa lagu daray Kuwaas waxaa ka mid ah Naver V ama Yahoo apps sida Maaliyadda, Ciyaaraha iyo Wararka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay soo bandhigeysaa astaamo cusub oo shaashadda Edge ah
Xannibal Ardid dijo
taasi waa shaashadda guud sidoo kale, qaybta qalooca ma laha shaashad
Jawaab Anibal Ardid
Laba sawir cusub oo dhab ah oo Samsung Galaxy S7 gees ah ayaa la sifeeyey
Sida loo waafajiyo heerka mugga barnaamij kasta oo Android ah